कसरी च्यापिन्छ ढाडको नशा? ५ कारण र समाधानका ८ उपाय | Hamro Patro
अर्थोपेडिक तथा स्पाइन सर्जन डा. यादव बयोधा अस्पतालमा कार्यरत छन्
१. उमेरः उमेर जति बढ्दै गयो त्यति नशा च्यापिने सम्भावना बढ्दै जान्छ। उमेर बढ्दै जाँदा मेरुदण्डको 'डिस्क' खिइँदै जान्छ। डिस्क सुक्दै गएपछि नशा च्यापिने सम्भावना बढ्छ।
२. चोटपटकः लडेर वा खेलकुदका क्रममा शरीरको सन्तुलन बिग्रिई ढाडमा चोटपटक लाग्दा वा सड्किँदा पनि नशा च्यापिन सक्छ। केटाकाटी वा खेलाडीलाई यो समस्या बढी आउँछ। चोटपटकका कारणले 'डिस्क प्रोल्याप्स' हुँदा ढाड अत्याधिक दुख्छ। फुटबल, क्रिकेट खेलाडीहरु घाइते भएर बस्ने गरेका अधिकांश घटनामा मेरुदण्डको नशा च्यापिएको हुने गर्छ।